10 Waxyaabood oo laga bartay kulankii shalay dhexmaray kooxaha Banaadir iyo Jeenyo ee kama dambaysta koobka Jeneraal Daa’uud – Gool FM
10 Waxyaabood oo laga bartay kulankii shalay dhexmaray kooxaha Banaadir iyo Jeenyo ee kama dambaysta koobka Jeneraal Daa’uud
Haaruun October 31, 2016
(Muqdisho) 31 Okt 2016 – Kooxda kubadda cagta Jeenyo United ayaa koobka Jeneraal Daa’uud shalay ku qaaday gool ku laadyo kulan ay Banaadir Sports Club ku wajahday garoonka Koonis, kaasoo waqtigii loogu tala galay ku soo dhammaaday barbaro 2-2.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa 10 waxyaabood oo aan shalay ka baranay Final-ka koobka Jeneraal Daa’uud:-
1- Kooxda Jeenyo ayaa markii labaad ku guuleysatay tartanka Jeneraal Daa’uud waxaana koobkan qaadistiisa ugu dambeysay sanadkii 2014.
2- Banaadir Sports Club ayaa ku guuldarreysatay inay ka aar-gudato dhigeeda Jeenyo madaama labadii kulan ugu dambeysay ay is wajahan ay Jeenyo guul ka gaartay naadiga Banaadir.
3- Ciyaaryahan C/casiis Catoosh ayey shalay u ahayd maalin u gaar ah maadaama ay ahayd kulankii ugu dambeeyey oo uu u ciyaaro kooxdiisa, xilli lugu xushmeeyey caalamadda hoggaaminta ama Kabtanimada, maadaama uu kooxdaka tagayo.
4- Goolhayaha Kooxda Jeenyo ee Mustaf ayaa ah goolhayaha kaliya ee bad-baadiyey labo gool ku laad kulankan.
5- Garoonka Banaadir ama Koonis ayaa shalay marti galiyey ciyaarta ugu adag uguna daawashada badnayd, maadaama taageerayaal badan oo illaa kumanaan ah ay u soo daawasho tageen garoonka.
6- Xiddiga u dhashay dalka Uganda ee Imaam ayaa ah xiddiga kaliya oo ajanabiga ah ee tartankan dhammaaday ka dhaliyey 5 gool iyo wax ka badan, waxaana uu shalay gool ku lahaa labadii gool ee ay dhalisay kooxdiisa Banaadir.
7- Kulankii shalay waxaa imaaday oo garoonka soo xaadiray Madaxweynaha xiriirka Kubadda cagta dalkeenna Soomaaliya mudane C/qani Saciid Carab iyo madax kale.
8- Kabtanka hoggaamiya kooxda Banaadir Sports Club ee Daadir Aamiin Cali Daada ayey shalay u ahayd maalin madow, madaama wax muuqda uu san ka sameyn garoonka, xitaa shuut toos ah kuma aadin goolhaya naadiga Jeenyo.
9- Waa markii labaad ee kooxda Jeenyo ay koobk ka qaadeyso naadiga uu madaxweynaha ka yahay Abuukar Maxamed Sheekh, waxaana ay horay uga qaadeen Koobka Super Cup-ka.
10- Ciyaartii shalay waxaa dhax-dhaxadinaye ka ahaa garsoore Xamse, calan wadaha koowad waxa uu ahaa Suleymaan, halka calan wadaha laabad uu ahaa Axmed Baroodo, sarkaalka afaraad-na waxa uu ahaa Maxamed Somali.
FIFA oo Jeenyo ugu hambalyeysay hanashada koobka Janeraal Daa’uud